ရထားစီးပြီးခရီးသွားပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » ရထားစီးပြီးခရီးသွားပါ
Posted by kai on Dec 15, 2009 in Community & Society, How To.., Travel |0comments
မြန်မာတွေဆိုတာ ရထားနဲ့ မစိမ်းလှပါဘူး၊ မြန်မာပြည်အင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့လေတော့ ဟိုးရှေးခောတ် ကျောက်မီးသွေးရထားတွေကနေ ဒီဇယ်ခေါင်းရထားကြီးတွေအထိ တွေ့ဖူး၊မြင်ဖူး၊ စီးဖူးကြမှာပါ။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဆွဲချအစိုးရမင်းများလက်ထက်တွေမှာတော့ (အရာရာ)ဆွဲချခံကြရတာမို့လျှပ်စစ်ရထားတွေကိုတော့ (နိုင်ငံခြားထွက်သူများကလွဲပြီး) မစီးဖူး၊မမြင်ဖူးကြတော့ဘူးပေါ့။
ထားပါတော့..။ဆိုလိုချင်တာက ရထားစီးပြီး ခရီးသွားခြင်း “အရသာ” အကြောင်းပါ။ ကျုပ်တော့ လော့စ်အိမ်ဂျလိစ်-နယူးယောက် အန်းထရက်ရထားစီးပြီး ခရီးသွားဖူးတာမို့ အဲဒီ”အရသာ” ကိုသိပါတယ်..။ အဲဒါလေးပြောချင်ပေမဲ့..“အရသာ” ဆိုမှတော့ ရှင်းပြရခက်မှာမို့ လက်တွေ့ကျကျ အောက်ကစာလေးဖတ်ပြီး (လျှော့ဈေးလေးနဲ့)ခရီးသွားကြည့်ပါလို့ ပါပဲ။တကောင်ထဲပဲ“ဒါပေမဲ့ခြင်္သေ့”-“ ခြင်္သေ့ခရီးသွားနေသည်”တော့ မလုပ်နဲ့ပေါ့နော..။ ပျင်းစရာကြီး…၊ တတ်နိုင်ရင်”ချစ်သူ”နဲ့ သွားပေါ့။
Amtrak recently announcedanew way for customers to save 25% when booking rail travel — the Weekly Specials program. Every Tuesday you’ll find new deals on train routes across the country — from the Northeast Regional service to long distance routes in the West. Check out the cities and train routes near you that are on sale this week.
Only available on Amtrak.com every Tuesday – Friday, these special one-way fares will save you 25% off our low coach fares. Fares are available for travel every day of the week except Fridays and Sundays.
This week’s specials include (end points and all intermediate stations):
See More Weekly Specials »